नयाँ बर्षको शुभकामना ! – HostKhabar ::
सुर्खेत : १ बैशाख सोमबारबाट हामी बि. सं. २०७७ सालमा प्रबेश गरेका छौं । विक्रम संवत अनुसार सोमबार नयाँ वर्ष सुरु भएको छ । २०७७ साल वैशाख १ गते नयाँ वर्षको पहिलो दिन सबै नेपालीहरु खुशी साटासाट गर्दै नयाँ बर्ष मनाउँदैछन् ।
नयाँ बर्ष संगै नेपालीहरु यस अवशरमा दुःखका भोगाइहरु हुँदा हुदै पनि खुशीको कामना गर्दछन् । असल कार्यको थालनी गर्ने अवशरको रुपमा पनि नयाँ बर्षलाई लिएर विगतका कमी कम्जोरीहरु नदोहोरिउन् भन्ने कामनाका साथ नयाँ बर्ष मनाउने परम्परा छ ।
यतिबेला हामी सबै नेपाली दाजु भाइ , दिदी बहिनीहरु कोरोना भाइरस कोभोड १९ विरुद्ध आ आफ्नै घर घरमा लकडाउनमा बसिरहेका छौं । हामी लकडाउनमा बसेको २१ औ दिन पुग्दैछ ।
हामीले अझै यो महामारीको सामना गर्न लक डाउनको पालना गर्नुपर्ने छ । सरकारले आब्हान गरेको लकडाउनको पालना गर्दै र घरमैं बसेर आँफु अनि परिवार र समाज सुरक्षित पार्नुछ । यो घडीमा हामी घरबाटै विश्व शान्तिको कामना गरौं, महामारीको अन्त्य भई सम्पूर्ण नेपालीहरु र विश्व जगतको खुशीका पलहरु शुरु हुने कामना गरौं । नयाँ बर्षको शुभकामना ।